Kuzokhulekelwa ukhetho eMgungundlovu | News24
Kuzokhulekelwa ukhetho eMgungundlovu
PHOTO:supplied UNathi noNkanyiso abangabanye babaculi abazobe benandisa kulenkonzo yokukhuleka ukhetho.
ABEFUNDISI bamabandla ehlukene eMgungundlovu namaphethelo bamema abazalwane ukuba babe yingxenye yenkonzo yokukhulekela ukhetho lohulumeni basekhaya olungomhlaka 3 ku Agasti nonyaka.
Lenkonzo izobanjelwa e-City Hall ngoMgqibelo mhlaka 16 ku Julayi kanti ngokusho kokhulumela iThemba Njilo Foundation, uThula Mhlophe uthe ngokubuka izigigaba zakamuva zokubulala ezihlobene nezepolitiki abefundisi ngokubambisana nomasipala woMsunduzi neThembanjilo Foundation babone ukuthi kwenziwe lomkhuleko.
“Umasipala woMsunduzi iwona ogqame kakhulu ngezigameko zokubulala njengoba sibheke okhethweni lohulumeni basekhaya. Esigamekweni sokugcina kubulawe abesifazane ababili abebengamalunga e-ANC baseMbali.Lenkonzo ngeyokukhulekela uzinzo nokuthula kulelidolobha lethu ngesikhathi sokhetho.”
UMhlophe uthe abayobe behambele lenkonzo bayanxuswa ukuba bangayifaki imifaniswano yabo yezepolitiki kodwa bagqoka imifaniswano yabo yasemabandleni.
“Sicela bafake imifaniswano yabo yasemabandleni ngoba bazobe beze enkonzweni. Nalabo abaqokelwe ukuba bangene ezikhundleni emuva kokhetho bamaqembu ehlukene siyabamema ukuba babe yingxenye yalomkhuleko.”
Phakathi kwabaculi ekulindeleke ukuba banandise kulenkonzo, uNathi noNkanyiso, Dumi Mkokstad, Hlengiwe Mhlaba, Malusi Ndimande, Ndoda Maphumulo, Nelly ka Dlamini, Mqapheli kanye nabanye abaningi.
Inkonzo iyoqala ngehora leshumi ekuseni kanti ngeminye imininingwane ungaxhumana noThula Mhlophe ku 063 1884615.